World Tourism Network inoyambira: Usaparadze iyo Luxury Travel Market!
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Nhau Nhau » World Tourism Network inoyambira: Usaparadze iyo Luxury Travel Market!
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Kutarisirwa • ushanyi • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Wtn
Ramangwana repashure-COVID hwomutambarakede kufamba kwakaratidzwa
Tourism yakavakirwa pakugadzira ndangariro uye ndangariro dzinobva kune dzakasiyana uye dzinonakidza zviitiko. Kana yekutanga-kirasi yekufamba yakaderedzwa kusvika padanho rebasa rekufamba kwehupfumi hwemakore mashoma apfuura asi nemutengo wepamusoro, saka nyanzvi dzekufambisa hadzifanirwe kushamisika kana bhizinesi pakupedzisira ramira.
Kubva denda reCovid raparadza indasitiri yekushanya, vatungamiriri vayo vanga vachitsvaga nzira dzekudzoreredza kurasikirwa kwemari.
Vamwe vari muindasitiri vakakwidza mitengo, vamwe vakadzikisa zvinhu nemasevhisi, kazhinji vachipomera inflation, kutadza kwekutengesa, kushomeka kwevashandi vane hunyanzvi, kana Covid-Pandemic.
World Tourism Network inonzwisisa kuti matambudziko akanyorwa pamusoro ndiwo matambudziko chaiwo.
Dr. Peter Tarlow, purezidhendi weWorld Tourism Network, uye ariwo nyanzvi mukufamba kwepasi rose uye kuchengetedzwa kwekushanya nekuchengetedza anotsanangura:
Matambudziko aya, zvisinei, ndeeindasitiri uye hazvibatsire kune indasitiri iri kutsvaga kudzoka kubva kumucheto kwenjodzi kuti ishandise kazhinji zvishoma pane zvikonzero chaizvo mukubhadharisa kwayo mafambiro eumbozha asi kazhinji ichiunza zvishoma kudarika izvo munhu angaite. kutarisira.
The World Tourism Network, inomiririra nyika dzinoshanyirwa nemabhizimisi munyika 128, inokurudzira nhengo dzayo kushanda pakuvakazve kushanya nenzira iyo vaichimbova vatengi vayo havazongofungi nezve "mazuva akanaka ekare" ekufamba asi kutarisira mberi kune ramangwana umo mafaro nekunaka kwekufamba. shandura zvisizvo kuva zvisingakanganwiki.
Muzera rekuvakazve indasitiri yekufambisa uye yekushanya haigone kuona kudzikira kwemhando yechigadzirwa chayo kana musevhisi yainopa. Kuderera kwakadaro kwemhando yezvigadzirwa nemasevhisi anopihwa mukufamba kwenguva achakuvadza indasitiri yekushanya, uye nekufamba kwenguva, vatungamiriri vayo vacharasikirwa nemari.
Kana iyo indasitiri yekufambisa neyekushanya ichizobudirira munguva dzino dzakaoma, inofanirwa kuita zvinopfuura kungozviona seyakabatwa uye haigone kushandura vatengi vayo vanobhadhara kuva vatapurwi vebasa rakashata uye hurombo hwechigadzirwa.
Kana kufamba kukava dambudziko, kana kunakidzwa kwekufamba kukava basa rekufamba saka hapana huwandu hwehutsotsi hwehukama kana kushambadzira hunokwanisa kuvhara kuodzwa mwoyo kweveruzhinji. Pane kudaro, sezvo zvipikirwa zvichienda zvisina kuitika indasitiri yekushanya ichasangana nedambudziko rekuvimbika.
Veruzhinji vanofamba havana ruzivo kana ruzivo uye sezvo kunaka kwesevhisi uye zvigadzirwa zvinodzikira kana kuderedzwa, vafambi vachawana nzvimbo nyowani dzinoda kupa mhando yepamusoro yebasa uye zvigadzirwa pamutengo wakaderera.
Nechikonzero ichi, World Tourism Network inokurudzira indasitiri kuti:
Nzvimbo dzekugara dzinoda kupa masevhisi anoenderana nemutengo wachinjwa. Ihotera yepamusoro haigoni kuzivisa kuti ichachenesa kamuri kamwe chete mumazuva matatu. Kana uchichaja mutengo weumbozha wobva wapa basa reumbozha. Kana zvisiri kuderedza mutengo!
Dzosa uye ugadzire zvinhu zvitsva. Kupa bepanhau remahara, kana chokoreti yakakosha yehusiku inoshandura kugara kwevanofamba netsoka kuve kwakakosha uye kusingakanganwike kugara.
Izvo ndezvechokwadi kune indasitiri yepokugara ichokwadi kune indasitiri yendege. Kana ndege, kunyangwe mukirasi yekutanga kana yebhizinesi, ikasave chinhu kunze kwemabhazi-mu-mudenga saka pakupedzisira mufambi achawana dzimwe nzira. Munyika yanhasi bhizinesi rinogona kazhinji kuitwa pasina kunetseka uye mutengo.
Ndege dzinofanirwa kubvisa chimiro chavo chemubhadharo we la carte., Vanoda kuratidza veruzhinji kuti havana hanya chete kana vachitsvaga bhero rehurumende asiwo panguva dzakanaka.
Tourism uye mabhizinesi ekufambisa anofanirwa kuvandudza maawa ari mushandisi ane hushamwari kune vafambi. Kupinda muhotera na4pm uye kubuda na11:00 hupenzi kana mahotera asina kuzara. Mitemo yakadaro pakupedzisira inodhura kupfuura kushambadzira kunodhura kunopa zvivimbiso izvo pakupedzisira zvinowanzova zvinorasisa.
Simudzira kunaka kwezvigadzirwa zvinopihwa uye ita kuti zvigadzirwa zviratidze mutengo wemutengo. Kana hotera kana resitorendi ichichaja muripo wepamusoro saka mhando yechikafu chinopihwa inofanira kuratidza muripo iwoyo. Maresitorendi mazhinji emahotera anocheka makona asi ari kubhadharisa mitengo yeprimiyamu. Chinonyanya kukosha ndechekuti sezvo veruzhinji vachiwedzera kuziva nezve gakava riri pakati pemutengo nemhando yekutengesa uye mukurumbira zvinogona kutanga kudzikira.
Usavimbise zvausingakwanise kuita. Muchikamu chokupedzisira chezana ramakore rapfuura indasitiri yezvekushanya neyokushanya yakarwa kuti iwanezve kutendeseka kwayo. Ipapo 9-11 yakaita kuti veruzhinji vanzwire tsitsi kune zvinodiwa neindasitiri. Pakupera kwemakore gumi ekutanga ezana ramakore rechimakumi maviri nerimwe indasitiri yezvekushanya neyekushanya yakaparadza tsitsi idzodzo. Kufamba uye kushanya zvakawanazve hukuru hwekuda uye kunzwisisa mukati memakore eCovid. Ino ndiyo nguva yekushandura chido ichocho chakanaka kuita zviito uye kuratidza kune veruzhinji kuti indasitiri yekufambisa uye yekushanya inokoshesa vatengi vayo nevatengi nekugadzira zvigadzirwa zvitsva uye zvitsva pamitengo inoratidza chokwadi.
Iyo yakanakisa nzira yekushambadzira chigadzirwa chakanaka uye yakanaka sevhisi inounzwa mune inonakidza uye yakachengeteka & yakachengeteka ambiance. Kana kufamba uye kushanya zvichitevera mamwe eaya mazano ekutanga saka indasitiri huru yepasirese ichava huru zvakare.
Rumwe ruzivo nezve World Tourism Network uye nhengo enda kune www.wtn.travel
Nzira yekufamba sei neNew Covid Strain Omicron?